Opus One Cabernet Sauvignon 2015 Wine (TW60141) ~ ICT.com.mm
HomeOpus One Cabernet Sauvignon 2015 Wine (TW60141)
Opus One Cabernet Sauvignon 2015 Wine (TW60141)
Country: USA Region: Napa County, North Coast, CA Wine Style: Red-Bold and Structured Grape/Blend: Bordeaux Blend Red Alc: 12.7-15% Food Suggestion: Beef and Venison USA ရဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဝိုင်အမှတ်တံဆိပ် Opus One မှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Opus... [Learn more]
Region: Napa County, North Coast, CA
Wine Style: Red-Bold and Structured
USA ရဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဝိုင်အမှတ်တံဆိပ် Opus One မှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Opus One Cabernet Sauvignon (2015) ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် မြောက်ကမ်းရိုးတန်း Napa ကောင်တီဒေသမှာ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဝိုင်စပျစ်စိုက်ခင်းတွေကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်ဝိုင်နီစပ်နည်းဖြစ်တဲ့ Bordeaux Blend Red စပျစ်ရောစပ်နည်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Alcohol ပါဝင်မှု 12.7-15% ရှိပြီး Red-Bold and Structured ဝိုင်နီအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ အမဲသားနဲ့ သမင်သားကဲ့သို့ တောကောင်သားဟင်းလျာအမျိုးမျိုးဖြင့် တွဲဖက်သုံးဆောင်လေ့ရှိတဲ့ ကမ္ဘာကျော် Opus One Cabernet Sauvignon ဝိုင်နီ ဖြစ်ပါတယ်။
Opus One Cabernet Sauvignon 2015 Wine
Opus One is one of the world's most famous wines, and isapartnership of two of the most respected figures from Bordeaux and Napa Valley, Baron Philippe de Rothschild of Château Mouton Rothschild and Robert Mondavi. It was the first premium California wine sold in Europe, and is one of the original "Cult Cabernets", along with the likes of Harlan Estate and Screaming Eagle. It continues to be one of the most expensive Cabernet Sauvignon-dominant wines produced in Napa Valley.